Portable Mobile Prefab Container House na naa (Container Home) - China Qingdao Xinmao ZT Steel
Steel Structure ihe
Agba ígwè mpempe akwụkwọ
Ewepụghị mkpọ akpa ụlọ
Obibi / appartment
Mbupu akpa ụlọ
Steel ụba Structure Onodi Ụlọ
Portable Mobile Prefab Container House na naa ...
Portable Mobile Prefab Container House na naa (Container Home)
Description: modular obere akpa ụlọ e mere dị ka nkọwa nke mbupu akpa kpọmkwem. Ọ na-mere nke prefab ìhè ígwè dị ka etiti ma bred panel n'ihi na mgbidi na ụlọ, mgbe facilitated na windo, ibo ụzọ, flooring, n'uko, na ndị ọzọ na ndị ọzọ ngwa. Ha na-ruo eruo na ike na ọkụ na ike ga-accessorized ona gị chọrọ. Cabinet unit Ọdịdị maka iwebata nchara na c ...
Modular obere akpa ụlọ e mere dị ka nkọwa nke mbupu akpa kpọmkwem. Ọ na-mere nke prefab ìhè ígwè dị ka etiti ma bred panel n'ihi na mgbidi na ụlọ, mgbe facilitated na windo, ibo ụzọ, flooring, n'uko, na ndị ọzọ na ndị ọzọ ngwa. Ha na-ruo eruo na ike na ọkụ na ike ga-accessorized ona gị chọrọ. Cabinet unit Ọdịdị maka iwebata nchara na oyi na-atụ-kpụrụ ígwè welded ọnụ ka elu ọkọlọtọ components. The ụlọ nwere ike e mere nnọọ dị ka nanị otu unit ma ọ bụ jikọọ a dum si dị iche iche igbe, site mfe njikọ dị ka bolts. N'ihi ya, ọ dị mfe ma na ngwa ngwa na-arụnyere na disassembled.
Atumatu oru ngo a bụ ịchọta na Spain. Ọ bụ n'etiti ugwu na ọdọ, anya n'ebe ọgba obodo. Ọ bụ iso nke 49 mbupu akpa. The n'oge a haziri na-eme ka ụlọ anya mara na ala na-ebi ndụ. Haveing ​​ezumike ke ọ ga-abụ nnọọ mma na zuru ike.
Nke a bụ a ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Ị nwere ike inwe ụfọdụ kọfị na-enwe nri gị ebe a.
Zuru ezu kwa:
20FT / 40FT modular Portable akpa House nkọwa
mpụga size 6058mm (L) * 2438mm (W) * 2591mm (H) / 12116mm (L) * 2438mm (W) * 2591mm (H)
House nkuku Prefabricated ìhè ígwè
ụlọ panel Rock ajị / EPS bred panel (dị ka ndị ahịa chọrọ)
Panel Rock ajị / EPS bred panel (dị ka ndị ahịa chọrọ)
Ground isi Prefabricated ìhè ígwè
Ohere Ịkwanyere eji windo ma ọ bụ aluminum alloy window ma ọ bụ plastic ígwè window
Door Streel bred panel ma ọ bụ aluminum etiti kaadị panel ụzọ.
ụgha N'uko ịkwanyere n'uko
eletrik sys 2 ọkụ & 1 mgba ọkụ
Nhọrọ ngwa Ngwá ụlọ maka ụlọ ndụ, ọrụ, obibi, ụlọ mposi, Kitchen, naa, ịsa, wdg
ngwa Ibi ụlọ, ụlọ ọrụ, obibi, carport, shop, ụlọ ntu, miri, nzute ụlọ, kantiin, wdg
Ahaziri akụkụ bụ welcome.
Ụlọ, ala etiti, kọlụm na mgbidi ogwe nke akpa ulo ewepụghị-juru n'ọnụ, si otú n'ibelata njem olu, nwere ike mfe arụnyere na saịtị ma ọ bụ ga-eji mgbanwe njem.
(1) zukọrọ loading na njem
Otu 40FT HC ibu 2 tent kpọkọtara akpa ụlọ dimension- 5850mm * 2250mm * 2500mm
(2) Ewepụghị-mkpọ njem:
Plan A: One 20FT GP ibu 4 tent 20 ụkwụ akpa ụlọ
Plan B: One 40FT HC ibu 8 esetịpụrụ 20 ụkwụ akpa ụlọ ma ọ bụ 4 tent 40 ụkwụ akpa ụlọ.
All ogwe na-echebe na Pee film, na ígwè Ọdịdị ya amaghị na kpara belt. Ngwa ga-juru n'ọnụ na akwụkwọ igbe ma ọ bụ plastic akpa. Windows na ibo ụzọ ga-juru n'ọnụ na osisi igbe.
Qingdao Xinmao ZT Steel Construction Co., Ltd ụlọ ọrụ bụ otu n'ime mma-guzobere ụlọ ọrụ nwetara na pụrụ iche na n'ichepụta iche iche prefab ụlọ na akpa ụlọ ezi mma na asọmpi price. Tọrọ ntọala n'afọ nke 2003. More karịa 50 R & D mkpara na ihe karịrị 400 na-arụ ọrụ na-akwado anyị ka anyị na-na nnukwu ahịa òkè. Anyị ụlọ ọrụ enwetawo mba quality akwụkwọ ISO9001 na Steel Structure Construction iru eru Certificate mezuwo II.
Mmadụ Bịa na ileta anyị factory ozugbo.
20 Ewepụghị Pack Container House
40 Ụkwụ Container House
40ft Mbupu Container House
China akpa House
akpa House 40 Ft
akpa House Chi na
Ewepụghị Pack Cheap Container House
Ewepụghị Pack Container House N'ihi Sale
Flatpack akpa House
gbanwetụrụ Mbupu Container House
Ocean Mbupu Container House
Mbupu Container House
Mbupu Container House Building
Mbupu Container House N'ihi Sale
Underground Container Ụlọ
20 Ft gbanwetụrụ Mbupu Container House maka Sin ...
Prefabricated Site Nwụnye Mbupu Contai ...
Ewepụghị Pack 20FT Container House na Kitchen, Wa ...
Smart Prefabricated Mobile Mbupu Container H ...
Modern Sanwichi Panel Economic Ewepụghị Pack Prefab ...
Prefab Prefab Ewepụghị Pack Container House maka Ind ...